Hideo Nakata – Directors – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Death Note: L Change the World (2008) Unicode ဒီဇာတျကားကိုဘာသာမပွနျပဲခနျြထားခဲ့ပမေဲ့ တောငျးဆိုသူတှရှေိလို့ တငျပေးလိုကျပါတယျ. L ပရိတျသိတျတှအေတှကျ အကွိုကျတှမေဲ့ ဇာတျကားပါ။ Death Note2မှာ ကိုယျ့ကိုယျစာအုပျထဲ ၂၃ရကျကွာရငျသမေယျဆိုပီး ရေးခဲ့တဲ့ L တဈယောကျ အဲ့ ၂၃ ရကျအတှငျးမှာ ကမ်ဘာကွီးကိုကယျတငျသှားပါသေးတယျ။ ဒီဇာတျကားက Death Note စာအုပျနဲ့သိပျမဆိုငျတော့ပဲ လူသားတှကေို အမြိုးဖွုတျမဲ့ Virus အကွောငျးရိုကျကူးထားတာဖွဈပါတယျ။ ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ May Chit ဖွဈပါတယျ။ Zawgyi ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာမပြန်ပဲချန်ထားခဲ့ပေမဲ့ တောင်းဆိုသူတွေရှိလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်. L ပရိတ်သိတ်တွေအတွက် အကြိုက်တွေမဲ့ ဇာတ်ကားပါ။ Death Note2မှာ ကိုယ့်ကိုယ်စာအုပ်ထဲ ၂၃ရက်ကြာရင်သေမယ်ဆိုပီး ရေးခဲ့တဲ့ L တစ်ယောက် အဲ့ ၂၃ ရက်အတွင်းမှာ ကမ္ဘာကြီးကိုကယ်တင်သွားပါသေးတယ်။ ဒီဇာတ်ကားက Death Note စာအုပ်နဲ့သိပ်မဆိုင်တော့ပဲ လူသားတွေကို အမျိုးဖြုတ်မဲ့ Virus အကြောင်းရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ May Chit ...
IMDB: 6.1/10 7891 votes